Home Wararka Ciidamo xalay ku dagaalay deegaano ka tirsan Gobolka Gedo
Ciidamo xalay ku dagaalay deegaano ka tirsan Gobolka Gedo
Sida ay sheegayaan wararka naga soogobolka Gedo waxaa halkaas ka dhacay iskahorimaad hubeysan oo qasaare nafeed dhaliyay. Iska-horimaadkaan ciidan ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka Bohol Garas oo ka tirsan Doolow. Iskahorimaadkan ayaa waxa uu u dhexeeyay labo maleeshiyo beeleed waxaana la xaqiijiyay in shan ruux ay ku geeriyoodeen halka toban kalana ay ku dhaawacmeen dagaalka.
Dhanka kale,ciidankaan lagu sheegaty lmaleeshiyo Beeleed ayaa dagaalkooda waxaa uu salka ku hayaa isku qabsiga dhul ku yaal degaankaas. Wasiirka Amniga Dowlad Goboleedka Jubbaland Jeneraal Yuusuf Xuseen Cusmaan (Dhuumaal) ayaa sheegay in ka Jubbaland ahaan ay aad uga xun yihiin dagaalka dhexmaray labada maleeshiyo Beeleed.
Waxaa jira walaac laga qabo in uu dagaalka sii faafo oo qabiilo Soomaaliyeed iksu dilaan. Wasiirka ayaa ugu baaqay dhinacyada dagaalamay inay colaada joojiyaan, waxaana uu sidoo kale Ciidamada dowladda uu ka codsaday inay kala dhexgalaan maleeshiyaadka dagaalamaya.